Sheegashada shilka tareenka ee xawaaraha sare ee Ankara
Ankara ee Xaraashka Xawaaraha Sare ee Shilka ee Xaraash ee 9 ee qofka ladilay uu Dhameystiran; 13 ee Ankara Diseembar 2018'de 9 ee taariikhda shil tareen xawaare sare leh oo sababay geerida qofka dhammaystiray eedaynta, 10 ayaa lagu eedeeyay [More ...]
Ankara Shil Gaari oo Sheegay Sheegashada Macalimiin Sare
Dadka 9 ayaa la dilay dad 84 ku dhaawacmeen Baaritaankii socda ee shil tareenka xawaaraha sare ee Ankara, warbixinta ayaa la ballaariyay ka dib warbixinta khabiir. Maamulaha Guud ee TCDD ee muddada İsa Apaydın, laba kaaliye [More ...]
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turan, Bokoolaji waa duufaan. Turan, oo dhowaan xilka ka qaaday maamulaha guud ee 5, ayaa hoos u dhigay magac kale oo kursi ah. SözcüSida warku sheegayo Ismaaciil Sahin; Gaadiidka iyo [More ...]
Waxa laga soo noqday waajibaadkiisii, TCDD Taşımacılık A.Ş. Maareeyaha Guud Veysi Kurt halkii uu ka noqon lahaa Gaadiidka TCDD Inc. Kuxigeenka Maareeyaha Guud Erol Arıkan, oo kashaqeeya dhamaan heerarka Tareenka, waxaa loo magacaabay Maareeyaha Guud ee Hay'ada. 1978 [More ...]
Agaasime Ku-xigeenka Guud Ali Ihsan Uygun waxaa loo magacaabay Agaasimaha Guud ee TCDD. Agaasimaha Guud Cali Ihsan Xirun, 20 Febraayo 2019 Agaasimaha Guud ee TCDD ayaa qabtay munaasabad İsa Apaydınqabsaday. [More ...]
Maareeyaha Guud ee TCDD İsa Apaydın Iska daa
Nidaamka dib u dejinta ee Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha ayaa sii socota. Agaasimaha Guud ee TCDD İsa Apaydın, ayaa shaqada looga eryay xalay fiidkii Wasaaradda Gaadiidka oo isbedel ku sameeyay shaqaalaha. Toddobaadkii hore, Maamulka Garoomada Diyaaradaha ee Gobolka [More ...]